अभिभावक को दाहित्व | Rato Kalam
अभिभावक को दाहित्व
एक मास्टर साब ले आफ्नो छोराको लागि बिबाह बन्धनको बारेमा टुंगो गरे ।
केहिदिन पछि , मास्टर साब हुनेवाला सम्धी को घरमा गए त्यहा देखे कि हुनेवाली सम्धिनी खाना बनाइ रहेकी थिइन् भने सबै बच्चाहरु र हुनेवाली बुहारी TV हेरिरहेका थिए । मास्टर साब ले चिया पिए हालखबर सोधपुछ गरे र त्यहाँबाट बाहिर निस्किए ।
एक महिनापछि मास्टर साब सम्धी ज्यु को घरमा फ़ेरि गए त्यहाँ देखे कि हुनेवाला सम्धिनी कुचो पोछा लगाउदै थिइन , बच्चाहरु पढिरहेका थिए र हुनेवाली बुहारी सुतिरहेकी थिइन । मास्टर साब ले त्यहाँ खाना खाए र त्यहाँबाट बिदाभए ।
केहिदिन पछि , मास्टर साब केही कामले फ़ेरि हुनेवाला सम्धी ज्यु को घरमा गए । घरमा देखे कि हुनेवाला सम्धिनी भाँडाकुँडा माझिरहेकी थिइन् , बच्चाहरु Tv हेरिरहेका थिए र हुनेवाली बुहारी आफ्नो नङ मा नेलपालिस लगाई रहेकी थिइन.. ।
मास्टर साब घर आएर धेरै नै सोचबिचार गरे केटि पक्षलाई यो खबर पठाए कि हामिलाई यो सम्बन्ध मन्जुर छैन ।
...... कारण सोध्दा मास्टर साब ले भने कि "म हुनेवाला सम्धी ज्यु को घरमा तीन पटक गएँ" तीन पटक सिर्फ सम्धिनी ज्यु नै घरको कामकाजमा ब्यस्त देखिन्थिन । एक पटक पनि मैले हुनेवाला बुहारी लाई घरको कामकाज गर्दैगरेको देखिन । जुन छोरी ले आफ्नो साख्य आमालाई हरेक समय काममा ब्यस्त देखेर पनि उनको मद्दत गर्नका लागि सोच्दिन , उमेर ढल्किदै गरेकी आमालाई जवान छोरिले काममा सघाउने भावना राख्दिन ।
उसले कुनै अरुको आमा र कुनै अपरिचित परिवार को बारेमा सोच्छे र ....मलाई मेरो छोराको लागि एउटि बुहारिको आवश्यकता छ । कुनै गुलाफ को फुल को हैन, जो कुनै फुल लाई ल्याइ सजाउनको लागि चुरेस्टिन खोजेको हैन ।
त्यसैले सबै आमा बुबाले यो सानोसानो कुरालाई अवश्य ध्यान दिन जरुरी छ । छोरी जतिपनी प्यारी किन नहोस् । उसलाई घरको कामकाज अवश्य गराउनुपर्छ । समय-समयमा गाली गर्नु पनि पर्छ । जसलाई श्रीमानको घरमा धेरै कामको लोड पर्दा या गाली सहनुपर्दा उसले गलत फैसला गर्ने बिचार नआओस् ।
हाम्रो घरमा छोरिको जन्म हुन्छ , हाम्रो जिम्मेवारी , छोरिबाट "बुहारी" बनाउने सम्म हो ।
यदि हामिले , आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग ले निभाएनौ भने , छोरिमा बुहारिको संस्कार दिएनौ भने यसको सजाय छोरिलाई त मिल्छ नै साथमा आमा बुबालाई पनि मिल्छ जिन्दगीभर गालिको बर्षाहरु.....
जो कसैलाई सुन्दर , सुशील बुहारी चाहिन्छ । तर साथिहरु जब हामी आफ्नो छोरिहरुमा एक राम्रो बुहारिको संस्कार दिन्छौं तब न हामिलाई संस्कारी बुहारी मिल्छ?
यो सत्य कुरा कोहिकोही मान्छेहरुलाई नपच्न पनी सक्छ तर पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस .... बृद्धआश्रममा आमा बुबालाई देखेर सबै मान्छेहरु ले छोरालाई नै दोषी सम्झिन्छन । तर यो कसरी बिर्सन्छन कि आमा बुबालाई त्यहाँ पठाउन लाई कसैको छोरिको पनि अहम भुमिका हुन्छ भनेर । नत्र छोरा ले आफ्नो आमा बुबालाई आफ्नो बिबाह हुनु अगाडि नै किन बृद्धआश्राम पठाउदैन ।।
सन्तोष कार्की मौसुफ
साथिहरु पोस्ट कस्तो लाग्यो...
मेरो पूरा पोस्ट पढिदिनु भएकोमा धन्यवाद ।
म सधै तपाईंको मन छुने केहि न केही लेखहरु लिएर आउने कोशिश गर्ने छु। जसले तपाईंको मन छुन सकोस् , हृदय देखि नै धन्यवाद ।।
भोक , दूध र मेरो स्तन
विश्वकै महँगो लागुऔषध ‘आइस ड्रग्स’ को कारोबारी मोरङबाट पक्राउ
"त्याग्नु पर्छ" नरेशले मानेको, धर्म मात्र, राष्टको धर्म मान्नेहरुलाई, नरेशले बोलेको, भाषा मा…
ओलीमाथि व्यंग्य गर्दै भीम रावलले सुनाए कविता
काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले केपी ओली शर्माप्रति व्यग्य गर्दै कविता सुनाएका छन्। माधव नेपाल…
म छु नि नडराउन!
युबराज बाउन नेउपाने
युबराज बाउन नेउपाने जति रिसाए पनि जति खुसाए पनि मेरो मन भित्र को तिमी तिम्रो मन भित्र को म तिमी…
गरिबको छोरी --*-- १४ बर्षिय उर्मिला छिमेकीको घरमा चुलाचौका बडारकुडार गरेर आफ्नो घरमा आइन् ।&nbs…